Làlan-tokana tokana ampiasaina, ny fampiasana toerana malalaka misy tombo-kase, azo ampiharina tsara kokoa ny endrika ivelany, be mpampiasa amin'ny arisiva, tranomboky, antontan-taratasin'ny orinasa, sns.
◆ Afaka mampiasa ny habaky ny trano fanatobiana entana izy io noho ny famonosana mahazatra.
◆ Mety amin'ny karazana entana marobe izy io.
◆ Ny tahan'ny fampiasana ny tany dia mety hahatratra 80%.
◆ Azonao atao ny miatrika ny tsara tsirairay, fa tsy ny fidirana voalohany ary ny fidirana voalohany.
◆ Ny haavon'ny fametahana dia mety ho 12m.
◆ Amin'ny fampiasana fitaovana elektrika dia sarotra ny mitazona azy.
◆ Vola lafo, fotoana lava hamitana ny rafitra.
◆ Ny lalamby mpiambina dia tokony hapetraka ao ambanin'ny tany mba hahafahan'ny fiara mpitondra mandalo.
HEGERLS finday 2021 avo lenta 3000kgs isaky ny sosona entin'ny motera
. Izahay dia manokan-tena amin'ny saha fitahirizana trano fitahirizana mandritra ny 25 taona. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
1.Product fampidirana ny finday talantalana
Eo ambanin'ny tany
3.Product endri-javatra sy fampiharana
3.1 famaritana boaty boaty
4.Ny antsipirian'ny famokarana finday
4.1Izy dia afaka mampiasa ny habaka amin'ny trano fitehirizana noho ny mahazatra famonosana.
4.2 Izy io dia mifanaraka amin'ny entana vitsivitsy.
4.3Ny tahan'ny fampiasana ny tany dia mety hahatratra 80%.
4.4 Azonao atao ny miatrika ny tsara tsirairay, tsy ny voalohany, ny voalohany.
4.5Ny haavon'ny fametahana dia mety ho 12m.
4.6Mampiasa fitaovana elektrika, sarotra ny mitazona azy.
4.7Ny vidiny lafo, fotoana maharitra hamitana ny rafitra.
4.8Ny lalamby mpiambina dia tokony hapetraka ao ambanin'ny tany hahafahan'ny fiara mandehandeha mandalo.
Fahafaham-pahaizana momba ny vokatra rafitra rafitra mezzanine
Fanaterana. Fandefasana sy serivisy
F: ahoana ny fametrahana?
Teo aloha: HEGERLS Fialana andraikitra mavesatra
Manaraka: HEGERLS manosika ny rafitra fametahana indray
Familiana finday mandeha amin'ny herinaratra
Rafitra fanodinana finday